Warshad shukulaato Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. —
Home » Warshad shukulaato Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Warshad shukulaato Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
By radiosomit.com October 14, 2021 No Comments2 Mins Read
Caqabadda ugu weyn ee ugu horreyey waxay ahayd barashada xirfadda, samaynta shukulaatada,
Ilaalo milateri ayaa lama huraan u ah in ay dhex wareegto magaalada Mutwanga ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Jabhadaha Xoogagga Dimuqraadiga ee Isbahaysiga ayaa halkan ku dilay ku dhawaad ​​kun qof sannadkii la soo dhaafay.
Beerta Qaranka ee Virunga ayaa caan ku ah gorillada. Laakiin in kasta oo aysan jirin kaabayaal dhaqaale, haddana ganacsi aan la fileyn ayaa ka soo ifbaxay halka ay buuraha Rwenzori ka ilaaliyaan xadka Uganda taasoo ah warshad shukulaato.
Caqabadda ugu weyn ee ugu horreyey waxay ahayd barashada xirfadda, samaynta shukulaatada, ayuu yiri Roger Muhindo, madaxa wax soo saarka ee Virunga Origins Chocolates.
Virunga Origins Chocolates waxay kookaha ka iibsataa soo-saarayaasha maxalliga ah si looga hortago tahriibin xadka laga tahriibiyo. Waxay isku daydaa inay muujiso nolol ka duwan midii hore, tasoo ka fog khilaaf.
In ka yar hal sano, in ka badan 200 oo qof ayaa lagu dilay masaafo dhan 20 kiiloomitir. Beeraley badan ayaa ka tagatay beerahoodii.
Askartu waxay yimaadeen bishii May kadib markii Madaxweyne Felix Tshisekedi uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loo joojiyo rabshadaha.
Laakiin dilalku waxay ka sii socdaan meelaha fog ee miyiga.
“Waxaan meel walba u dirnaa cutubyo yaryar si ay u ilaaliyaan dadka beerahooda tabcanaya. Waxay ka dhigaysaa shaqadeenna mid aad u adag. Antony Mwalushayi, oo ah afhayeenka hawlgalka ciidanka Congo ee ka dhanka ah ADF ee Beni ayaa yidhi, cadowgu ma haysto wax kale oo aan ahayn in uu wax dilo.
Warshadda korontada ee Virunga Park ee ku taal dhulka hoostiisa ee Rwenzori waxay hawlgashay 2013. Waxay laydh siisaa Mutwanga, waxaana jirta rajo ah inay soo jiidan doonto ganacsi badan.
“Maaddaama korontadu timi Mutwanga, dadku waxay og yihiin in saliiddooda timirta laga miiro laga farsamayn doono saabuun. Tani marka hore waa wax muhiim ah. Warshadda shukulaatada, dadku waxay arki karaan kookaha oo loo beddelay shukulaato. Gobolkuna ka helay dhaqaale. ”
Warshadda shukulaatada waxaa ka shaqeeya toban shaqaale oo waqti-buuxa haysta, ayna ku jiraan afar dumar carmal oo ka mid ah ilaaliyaasha baarkinka.
Warshadu way sii fidaysaa si ay u daboosho baahida caalamiga ah. Waxay markaa soosaari doontaa in toban laab ka badan shukulaatada.